Youtube Statistics (2020) - Zava-mahatalanjona tokony ho fantatrao - Ara-Tsosialy
Youtube Statistics (2020) - Zava-mahatalanjona tokony ho fantatrao
Fantatrao ve fa ny horonantsary YouTube voalohany dia nakarina tamin'ny 23 aprily 2005? Nanomboka teo dia lasa lavitra ny YouTube ka lasa tranonkala faharoa be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao. Hany ka saika ny 60% -n'ny olona no maniry sehatra fampitana video an-tserasera toa ny YouTube noho ny fahitalavitra tariby na mandoa rindranasa izay lasa malaza.
Mitady zava-misy sy antontanisa mahafinaritra hafa ve ianao? Avy eo andao hijery ny sasany amin'ireo zava-misy mahaliana indrindra izay ho tsara ho an'ny fampahalalana sy ny fahalalanao ankapobeny.
Statistika Youtube - Zava-misy mahaliana sasany
YouTube dia noforonin'ny mpiasa taloha telo ao amin'ny Paypal tamin'ny taona 2005. Amin'ny maha tranonkala faharoa be mpitsidika indrindra azy dia efa ho 80% ny mpampiasa no manana kaonty YouTube. Maherin'ny 40% ary efa ho 45% ny olona amin'ny Internet no mampiasa YouTube. Raha atao teny hafa, ny Youtube dia manintona ampahany lehibe amin'ny fivezivezena amin'ny Internet.
Toa tian'ny olona ny tolo-kevitry ny YouTube. Izy io dia manana taha ambony indrindra amin'ny tolotra, satria 70% ny olona no mijery na mahita horonantsary Youtube vaovao amin'ny alàlan'ny tolo-keviny. Zava-dehibe ho anao ny fanananao horonan-tsary manintona ao anatin'ny 10 segondra voalohany. Raha tsy manintona azy ireo ianao ao anatin'ny folo segondra voalohany, dia handao ilay horonan-tsary ireo mpampiasa.
Tsy izany ihany fa ny Youtube dia nihoatra ny motera fikarohana maro. An'i Google ankehitriny, YouTube no motera fikarohana faharoa be mpitia indrindra amin'ny Internet. Mety ho fantatrao fa Despacito no be mpijery indrindra, ary i Baby no horonan-tsary tsy tian'ny olona indrindra tao amin'ny YouTube.
Mijery ny statistika:
YouTube dia mahazo mpampiasa manodidina ny 2 miliara isam-bolana. Farafahakeliny olona 30 tapitrisa no miditra matetika ao amin'ny YouTube. Na izany aza, tsy misy afa-tsy mpamandrika fahitalavitra Youtube iray tapitrisa. YouTube ho an'ny finday dia mitombo tsikelikely ho lasa fitomboana lehibe ho an'ny YouTube. Mitombo hatrany ny vola miditra amin'ny finday YouTube. Raha mandeha amin'ny laoniny, maharitra mandritra ny 40 minitra ny seha-pivarotana YouTube antonony ho an'ny finday.
Jery ​​manodidina ny iray lavitrisa no azo amin'ny alàlan'ny finday YouTube isan'andro. Lahatsary iray tapitrisa mahery no navoakan'ny mpampiasa Youtube tao amin'ny Youtube. YouTube dia sehatra mitombo be dia be ka misy horonantsary maherin'ny 500 ora ampakarina isa-minitra ao amin'ny YouTube.
Lafiny ara-bola Youtube:
Google dia nahazo Youtube $ 1,65 miliara tamin'ny Novambra 2006. Nanomboka tamin'izay, Youtube dia tompon'andraikitra amin'ny 6% amin'ny vola miditra amin'ny varotra doka an'ny Google. Youtube dia voadona tsy tapaka noho ny kalitaon'ny fepetra momba ny doka.Na eo aza izany, ny vola miditra amin'ny ankapobeny amin'ny Google amin'ny alàlan'ny Youtube dia manodidina ny $ 4 miliara. Google dia tsy nanambara zavatra betsaka momba ny zava-bitan'ny YouTube, afa-tsy ny toa sehatra video an-tsary manjaka.
Toy izany koa, Google dia nahazo an'i YouTube voalohany indrindra hanitarana ny fahaizany mikaroka, saingy nanjary lafiny famoahana horonantsary malalaka. Tsy mbola nisy firy momba ny fampisehoana. Na izany aza, ny vola miditra rehetra ateraky ny Youtube dia $ 15,1 miliara amin'ny taona 2019.
Noho ny olana an-tserasera momba ny zon'ny tompony, YouTube dia tsy maintsy nandoa $ .125 miliara hatramin'izao. Ny vidin'ny fandidiana amin'ny youtube amin'ny ankapobeny dia $ 6.35 miliara hatramin'izao, isan-taona.
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny karaman'ny YouTubers miaraka amin'ny 5K sy ireo izay manana mpanjifa 500K mahery. Saika manodidina ny folo heny ny fahasamihafana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fantsona YouTube misy mpanaraka 500 ka hatramin'ny 5,000 dia mahazo $ 315 isaky ny horonan-tsary. Mandritra izany fotoana izany, izay manana 500K + dia mahazo $ 3.8K farafahakeliny isaky ny mampakatra horonantsary.
Tsy azontsika atao ny tsy miraharaha ny zava-misy fa manjary manelingelina ny sehatra ny dokambarotra. Na eo aza izany dia maherin'ny 78% ny olona no mino fa sehatra fanaovana dokambarotra mahomby ny YouTube. Manodidina ny 62% amin'ireo tompona orinasa no mampiasa YouTube hamoahana atiny video.Ny marketing Affiliate dia nitombo tsikelikely tao amin'ny YouTube nanomboka tamin'ny taona 2017. Manodidina ny 80% ny mpividy vokatra no milaza fa nitady ny atiny tao amin'ny YouTube izy ireo.
YouTube sy izao tontolo izao:
Manodidina ny 16% amin'ny fifamoivoizana YouTube irery no avy any Etazonia. Na izany aza, 70-80% ny olon-dehibe (lahy sy vavy) no mampiasa Youtube. Tsy izany ihany fa malaza amin'ny mpampiasa zokiolona ny YouTube. Maherin'ny antsasaky ny 75+ taona dia mampiasa Youtube ny beantitra ao Etazonia. Mihoatra ny 89% ny mpampiasa no avy any ivelan'i Etazonia.
Andao hiresaka firenena. Androany, nahavita niitatra tany amin'ny firenena maherin'ny 100 ny YouTube miaraka amina fiteny 80 samihafa. Izy io dia manana mpamorona 50 tapitrisa manerantany. Ankoatr'izay, India dia iray amin'ireo faritra matevina indrindra, miaraka amin'ireo mpampiasa mavitrika 265 tapitrisa.
Na dia fiteny malaza aza ny anglisy dia manodidina ny 35% amin'ny atiny ao amin'ny Youtube ihany no miteny anglisy. YouTube koa no fampiharana streaming mivantana faharoa malaza sy ankafizina indrindra aorian'ny Netflix noho ny atiny feno sy fifamofoana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia nyisairaysehatra taleon'ny mpampiasa satroka ny toerana misy ny doka mahazatra.
Inona no mamaritra ny horonantsary Youtube tsara?
YouTube dia toerana iray izay mety hahatonga ny olona ho tonga fahatsapana tsy ampoizina mandritra ny alina. Tsy maninona ao amin'ny YouTube ny hoe malaza raha tsy manome atiny mifandraika amin'izany ianao. Araka ny voalazan'ny YouTube, zava-dehibe telo heny farafahakeliny farafaharatsiny mba hifandraisan'ny mpampiasa amin'ny mpampiasa. 1.6x ilaina kokoa ny fananana horonan-tsary mifandraika amin'ny tombotsoan'ny mpijery.
Tamin'ny taona 2019, YouTube dia nanao fanitsiana sy fanovana maro tamin'ny kalitaon'ny atiny, fiarovana ny marika, sy ny maro hafa. Nanomboka tamin'izay dia 70% ny olona mety tsy hahazo vaovao diso. Anisan'izany ireo horonantsary toy ny baitsy tsindry sy atiny hafa tsy dia karohina loatra izay manome fampahalalana diso na diso.
Raha atao teny hafa, ny fitsipi-pifehezana vaovao ao amin'ny YouTube dia manome antoka fa ny fampahafantaran'ny mpamaky ny fampahalalana tena marina sy tena izy ihany.
Aza adino ny miralenta!
Na dia lohahevitra marefo aza ity dia manana mpijery 53% ny Youtube izay tia ny atiny voalanjalanja sy miralenta. Mitovy isa na mihoatra ny isan'ny vehivavy endri-tsoratra no lasa tian'ireo mpijery. Toy izany koa, 39% ny fotoam-pikantsanana natokana ho an'ny vehivavy. Ny lehilahy dia mbola mila miteny indroa bebe kokoa ary miteraka vokatra 56% raha ny vehivavy kosa mandany manodidina ny 53% amin'ny fotoana fandefasana.
YouTube dia sehatra horonantsary miely izay mbola tsy misy mitovy aminy. Taorian'ny fahombiazany tamin'ny sehatra hafa rehetra, Google dia manome laharam-pahamehana ny YouTube ho zavatra lehibe manaraka hanitarana ny sandany. Miasa amin'ny fanomezana vokatra sy fiasa vaovao ampiasaina amin'ny Youtube izy.
Ireto misy sasany amin'ireo zava-misy voadinika tsara azonay entina aminao. Raha tokony ho ny zava-misy sy ny antontan'isa iraisana, dia omenay anao ireto antoka ireto avy amin'ny loharanom-baovao marim-pototra.
Seraph of the End Season 3: Havaozina ve izy io sa hofoanana?
Niditra tamin'ny Hall of Fame Golf ihany i Tiger Woods
karatra fanomezana maimaim-poana tsy misy fanadihadiana
sarimihetsika hd an-tserasera sarimihetsika feno maimaim-poana
tranonkala tv maimaim-poana maimaim-poana
tranokala lalao tsy voasakana any an-tsekoly
esory ny download proxy youtube
Android emulator maimaim-poana windows 10